Hery Rajaonarimampianina : Laharam-pahamehana ny fahadiovana -
AccueilSongandinaHery Rajaonarimampianina : Laharam-pahamehana ny fahadiovana
Hery Rajaonarimampianina : Laharam-pahamehana ny fahadiovana
11/01/2018 admintriatra Songandina 0
10 janoary, androm-pirenena ho an’ny fanadiovana omaly, izay fepetra noraisina taorian’ ireny valanaretina pesta izay niseho sy nitranga teto amin’ny firenena ireny, fepetra mendrika satria dia miantoka ny soa tokoa ny vokatra hotazana amin’ny fiaraha-mientana tahaka izao, indrindra ho an’ ny vahoaka Malagasy na tsy pesta ihany aza no resahina. Ho an’ny Filoha izay nitarika iny androm-pirenena ho an’ny fanadiovana omaly iny, dia tetsy amin’ny fokontany Iavoloha no nanombohan’izy ireo ny hetsika niaraka tamin’ireo mpiara-miasa aminy rehetra. Nampiseho fihetsika azo tarafina sy azo alain-tahaka tanteraka ihany koa ny filoha Hery Rajaonarimampianina omaly, satria dia nirotsaka an-tsehatra mihitsy ny tenany teny an-toerana niaraka tamin’ ireo mponina niaraka nanadio. Tsy vitan’ ny nanadio ihany anefa ny Filoha nandritra io androm-pirenena io fa dia teo ihany koa ny fanentanana ireo mponina teny an-toerana, isan’izany ny mpivarotra sakafo mialoha ny hiditra an’ Iavoloha “tsara satria efa nanadio tokoa ianareo, ary tokony hatao isan andro izany, tsy tokony hohadinoina ihany koa ny manadio ny tatatra mba tsy hijanon’ny loto manoloana ny fivarotana” hoy ny filoham-pirenena niresaka tamin’ny tompon’ny tsena.
Ankilany dia niroso hatrany ny asa fanadiovana, ary nampiasaina avokoa ny fitaovana rehetra toa ny kifafa sy ny angady hahalavorary ny asa, nanaraka teny foana ihany koa ny trakitera izay hitaomana ny fako izay voafafa sy voaangona. Nadio tsy tahaka an’isan’andro tokoa ny tanàna taorian’ izay fanadiovana izay niarahan’ny mponina teny an-toerana tamin’ny filoham-pirenena. Laharam-pahamehana tokoa ny fahadiovana hoy hatrany ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina, ary manana andraikitra amin’izany ny tsirairay, satria dia tsy fanadiovana ihany no natao fa teo ihany koa ny fanentanana ny vahoaka Malagasy “ tsy tokony hiandry ny tompon’andraikitra foana isika, ny ben’ ny tanana , ny mpiasan’ny kaominina, fa raiso ny anjara tandrify anao tsirairay satria mahasoa izany” hoy hatrany ny filoham-pirenena. Ankilany dia nisy ihany koa ny teny fampieritreretana izay tokony arahina fiovana toe-tsaina, izany no nambaran’ny filoham-pirenena fa tokony hotanterahin’ny tsirairay “ mba hampisy ny fahadiovana dia mila miova mihitsy ny foto-pisainantsika, satria izao dia efa hita mazava izao fa io ny dabam-pako saingy eny ivelany ihany no arian’ny sasany ny fakony. Zavatra hita maso izany” hoy ny Filoha nandritra ny resaka nifanaovany tamin’ ny mponina. Ankoatra izay dia tsy nohadinoin’ ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny nampianatra ihany koa ny tsara ho fantatra momba ny fisokajiana ny fako, toa ny tsy tokony hanariana ny platsika sy ny tavoahangy any anaty tatatra. Eoo ihany koa ny fisokajiana azy ireny rehefa tonga ny fotoana fanariam-pako. Taorian’ny fanadiovana tetsy Iavoloha moa dia mbola nitohy hatrany ny fitsidihana ireo fokontany hafa izay mbola ao anatin’ny fanadiovana . Anisan’ny nambaran’ny filoha ihany koa moa nandritra ny andron’ny fanadiovana fa tokony hatao adidy mihitsy ny fanadiovana fa tsy tokony atao fitia te hisehoseho fotsiny ihany.
Vao nilatsaka nandritra ny 30 minitra ny orana ny alatsinainy hariva teo, dia efa niakatra izay tsy izy ny rano tamin’ireo faritra iva teto an-drenivohitra. Anisan’ireo faritra nitondra faisana tamin’izany ny teny Besarety, teo ihany ...Tohiny